नेपाल खुसी माल्दिभ्स झनै खुसी
नेपालमा जारी १३औं साग गेम्सको नतिजा धमाधम नेपाली खेलाडीको पोल्टामा पर्या पर्यै छ । खेलाडी छुरा भा हुन् कि घरेलु मैदानको फाइदा उठाएका हुन् मेडलको वर्षा खुब चल्या छ ।
सत्य सत्य ढाट्दिन भन्नेले..
धरान लाहुरेहरूको सहरमात्रै होइन। बामपन्थीहरूको गढ पनि हो। अहिलेको निर्वाचनले धरान नगरमा वाम पार्टीको ‘निद हराम’ भएको छ। २०४७ पछिका हरेक निर्वाचनमा लाल झन्डा फरफराउँदै आएको सो नगरमा यसपटक कांग्रेसले
क–कसलाई लोप्पा ?
उपनिर्वाचनको परिणामको खरर आइरा’छ। खवर धेरैलाई अच्छा भाछ भने कसैका लागि निकै कच्चा। अच्छा खवरले नेकपाका नेता÷कार्यकर्ता दङ मख्ख भा’छन्। दुई ठूला पार्टी गाभिएर एउटै हुँदा पनि मख्ख नपरे कहिले
देवघाट, हिन्दूहरुको महत्वर्पूण धार्मिकस्थल। बंैस र पैसा हुँदा धेरैले चिन्दैनन्। अल्लारे उमेरमा कसैले बताए पनि, सुनाए पनि एक कानले सुनेर अर्कोले उडाउँछन्। तर उमेर ढल्कदै गएकाहरु आर्यघाट पुग्नुभन्दा देवघाट पुग्न
को बिलायो ?
कांग्रेस नेता देउवा हिजोआज सरकारविरुद्ध खरोरूपमा उत्रिया छन्। प्रधानमन्त्री ओलीकै ‘ग्रिन सिग्नल’ ले गर्दा भारतले नेपालको भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न आँट गर्या उनको दाबी छ। देउवाको बोली बुझिँदैन भन्नेले
त्रिचन्द्र क्याम्पस, नेपालको शैक्षिक धरोहर। नेपालको उच्च शिक्षाको इतिहासमा छुटाउनै नहुने शैक्षिक थलो। जहानियाँ राणाकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले स्थापना गर्या शिक्षाको मन्दिर। ऊ बेला त्रिभुवन चन्द्र इन्टरमिडिएट क्याम्पसका रूपमा
चन्द्रमा दायाँ भएसी
लेखान्त भन्ने कुरो पनि अचम्मै हुने भन्या। सामान्य घरबार भएकाहरू दरबार छिर्ने दरबारका जन्मजात हकदारहरू सामान्य दैनिकीमा झर्ने। राज खान्दानमा हुर्किएकालाई सामान्य जिवन जुर्ने, दुर दराजमा सामान्य थाङ्नामा लटपटिदै च्याख्ला,
को असली राष्ट्राध्यक्ष ?
मुलुकबाट राजतन्त्र बाईबाई भएको डेढ दशक पुग्न लाग्यो। श्रीपेज ओड्ने राजा आउट भएसी जनताका छोरा/छोरी उनको भूमिकामा छन्। श्रीपेजसहितका राजारानी नभए पनि मुलुकमा श्रीपेजबिनाका राजारानी छताछुल्ल छन्, तीन वटै तहमा
रिजल्टको चुरो कुरो
विद्यालय र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले प्राप्त गर्नुपर्ने ‘पास माक्स’ र नेता–मन्त्री उत्तीर्ण हुन प्राप्त गर्नुपर्ने अंक कहाँ उस्तै हुँदो रै’छ र ? क्याबिनेट गोलमेल गर्दा मन्त्रीलाई गरिएको ‘किक आउट’ देख्दा उत्तीर्ण
ठूलो चर्चालाई चिर्दै अन्ततः कम्रेड ओलीको मन्त्रिपरिषद् गोडमेल भएको छ। स्वच्छ छवि र इमानदार भनिएका मन्त्री किकआउट भएका छन् भने अचाक्ली आलोचना बेहोरेका गोडमेलमा परेनन्। फलना–फलना क्याबिनेटका खुङ्खार धमिरा हुन्
पिरतीले गर्नु गर्यो
नेता मन्त्री हुनलाई तछाडमछाड गर्छन्। जुनसुकै त्याग र तपस्या गर्न तयार हुन्छन्, खर्चको त झन् कुरै नगरम्। तर अब मन्त्री बन्ने अफर आयो भने नेता झस्किने दिन आयो, परपर पन्छिने
पीएम ओली सरकारको गियर चेन्ज गर्दै तीब्र गतिमा क्याविनेटलाई हुँइक्याउने तयारीमा जुट्या छन्। हालै सचिवालय गोडमेल गरेका उनले छिटै क्याविनेट फिल्टर गर्ने कुरो छ। क्याविनेटमा खुसुखुसु खिया लगाउने अनि मौका
शनिबार साँझ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह ठमेलको एक नाइट क्लबमा सपरिवार मस्ती गरेको फोटो र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो। ज्ञानेन्द्र शाह क्लबमा जानै नहुने भन्ने त होइन। तर, उमेरले सात
सिद्धार्थ राज कहिलेसम्म ?
हिजोबाट मंसिर शुरु भएको छ। विहे नगरेका जोडीलाई दवाव दिने महिना। अविवाहितलाई मात्रै होइन, उद्योगी, व्यवसायी र करदाताका लागि मंसिर विशेष हुने गर्छ। कसले कति कमायो र राज्यलाई कति राजश्व
भक्तपुर–कमलविनायक–नगरकोट सडक स्तरउन्नति शुरू भएको पाँच वर्ष नाघिसक्यो। साढे १५ किमी हाराहारीको सडक २०७३ असार पहिलो साता निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो तर ठेकेदार ठगदार भएसी काम ज्यूँका त्यूँ छ। नगरकोट
रौतहट बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको प्रमाण छताछुल्ल भएपनि कानूनविद्हरू उल्टै कांग्रेस नेता आलम जोगाउन खुलेआम लागिपर्या छन्। ‘आलमलाई जोगाउँछौ सत्यलाई असत्य र असत्यलाई सत्य प्रमाणित गछौं’ भन्दै
सरकार सुस्त भएको आवाज सर्वत्र गुन्जन थालेसी पीएम ओलीको ध्यान भंग भाछ। बालुवाटार परिसर हुँदै किचेन क्याबिनेट र बेडरुमसम्मै पुग्नेबाट ओली बल्ल सर्तक भाछन्। आफ्नो दुनो सोझ्र्याउनेलाई गोडमेल गर्दै सरकारको
भारतले कालापानीसहितको नेपाली भूमि सुटुक्कै गाभेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसी सो कदमको प्रतिकारमा नेपाली उत्रिया छन्। अन्य बेला मध्य हिउँदको सिरक तानातान गरेझै गर्ने सबै दलका नेता अहिले एकजुट भा’छन्।
केही वर्षअघि एक तीर्थयात्री मनकामना माईको दर्शन गर्न मस्र्याङ्दी पार गरेछन्। केबल कार चलेपछिको कुरा हुन्थ्यो भने, त्रिशूली पार गर्थे होलान्, पुरानो कथा भएकाले आबुखैरेनीबाट पैदलै जघाँर तरेकारे मस्याङ्दी !
देवता, मान्छे र दानव
अस्ति देवता, हिजो मान्छे आज दानवका रूपमा चित्रित गर्नुपर्ने मान्छे यो संसारमा को होला? पाठकवृन्द तपाईंहरूले नै यसको जवाफ दिनुपर्नेछ। धरहरा यसको नाम भन्न सक्दैन। किनकि उसलाई नाम भन्ने अधिकार